Xukuumada Somaliland oo ka hadashay Hubkii Shiinuhu siiyay Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. | Entertainment and News Site
Home » News » Xukuumada Somaliland oo ka hadashay Hubkii Shiinuhu siiyay Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Xukuumada Somaliland oo ka hadashay Hubkii Shiinuhu siiyay Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Somaliland ayaa war ka soo saartay gaadiid dagaal iyo agab ciidan oo Shiinaha ugu deeqday dowladda Soomaaliya, iyadooo agabkan shalay uu la wareegay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya.
Agaasimaha Madaxtooyada Somaliland Mohamed Ali Bille ayaa sheegay in talaabadan ay tahay daandaansi lagu carqaladeynayo xiriirka Somaliland, Taiwan & Maraykanka.